Ndị na-ahụ maka imeziwanye ụlọ Ere na mgbazinye n'ime California
1 - 2 nke 2 Ndepụta
California bụ steeti na mpaghara Pacific nke United States. Ebe ihe dị nde 39.5 bi n'obosara ala dị 163,696 square (423,970 km2), California bụ obodo US kachasị buru ibu na mpaghara nke atọ kachasị ukwuu na mpaghara. Isi obodo steeti ahụ bụ Sacramento. Mpaghara Ugwu Los Angeles na San Francisco Bay Mpaghara bụ mpaghara ime obodo nke abụọ na nke ise, nke nwere nde 18,7 na 9.7 n'otu n'otu. Los Angeles bụ obodo kachasị elu na California, na obodo nke abụọ kachasị na-esote, na-esote New York City. California nwekwara obodo kachasị ọnụ, Los Angeles County, na mpaghara kachasị ukwuu site na mpaghara, San Bernardino County. Obodo na Obodo San Francisco bụ obodo nke abụọ obodo kachasị buru nke mmadụ na -ewu ebe New York City na obodo nke ise ndị mmadụ na –ejupụta karịa, n'azụ anọ n'ime obodo New York ise. Akụ na ụba California, yana nnukwu ngwaahịa dị $ ijeri $ 3.0, bụ akụ na ụba mpaghara sub-mba kacha ibu n'ụwa. Ọ bụrụ na ọ bụ mba, California ga-abụ mba nke ise kachasị na ụba ụwa (buru ibu karịa United Kingdom, France, ma ọ bụ India), yana obodo 37th kachasị ọnụ ọgụgụ ka ọ bụrụ na 2020. Greater Los Angeles Mpaghara na San Francisco Bay. Mpaghara bụ akụ na ụba obodo mepere emepe nke abụọ na nke atọ ($ 1.3 trillion na $ 1.0 puku dị ka nke 2018), mpaghara mpaghara New York gasịrị. Mpaghara San Francisco Bay PSA nwere nnukwu ngwaahịa ụlọ ala kachasị elu na isi obodo ọ bụla na 2018 ($ 106,757) n'etiti mpaghara nnukwu ndekọ ọnụ ọgụgụ, yana ụlọ atọ nke ụlọ ọrụ iri kachasị ukwuu n'ụwa site na isi ahịa na atọ nke mmadụ iri kasị baa ọgaranya n'ụwa. A na-ahụta ọdịnala dị ka ihe na - agbanwe agbanwe zuru ụwa ọnụ na ọdịbendị a ma ama, nkwukọrịta, ozi, okike, gburugburu ebe obibi, akụnụba, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ntụrụndụ. N'ihi ọdịiche na Mbugharị nke steeti, California na-ejikọ nri, asụsụ, na ọdịnala site na mpaghara ndị ọzọ n'ofe obodo ahụ na gburugburu ụwa. A na-ewere ya na mmalite nke ụlọ ọrụ ihe nkiri America, ụlọ ọrụ hippie, nri ngwa ngwa, osimiri na ọdịbendị ụgbọ ala, thentanetị na kọmputa nkeonwe. A na-ahụ Mpaghara San Francisco Bay na Mpaghara Greater Los Angeles dị ka ebe etiti nke teknụzụ zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ ntụrụndụ, n'otu n'otu. Akụ na ụba California dị ezigbo iche: 58% nke ya sitere na ego, gọọmentị, ọrụ ụlọ, teknụzụ, na ndị ọkachamara, sayensị, na ọrụ azụmaahịa. Agbanyeghị na ọ bụ naanị 1.5% nke akụ na ụba steeti, ụlọ ọrụ ọrụ ugbo na California nwere nsonaazụ kachasị elu nke steeti US ọ bụla. California na-ekerịta ókè na Oregon n'ebe ugwu, Nevada na Arizona n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, yana steeti Mexico nke Baja California na ndịda. Mpaghara ala dị iche iche sitere na Oke Osimiri Pasifik n'akụkụ ọdịda anyanwụ ruo na ugwu Sierra Nevada nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ, na site na ọhịa redwood na Douglas fir na ugwu ọdịda anyanwụ ruo Ọzara Mojave na ndịda ọwụwa anyanwụ. Ndagwurugwu Central, bụ nnukwu mpaghara ọrụ ugbo, na-achị steeti ahụ etiti. Ọ bụ ezie na a ma California ama ama maka ihu igwe dị na Mediterenian na-ekpo ọkụ, oke nke steeti na-arụpụta ugwu ndị dị iche iche site na oke mmiri mmiri ozuzo nke ugwu ugwu ruo na mbara ọzara n'ime mmiri, yana ugwu ugwu nke snowy na ugwu. Ka oge na-aga, ụkọ mmiri na anụ ọhịa aghọọla ugboro ugboro.Ka ndị agbụrụ California nwere mbụ bu ụzọ bido tupu ndị njem Europe gafee narị afọ nke iri na isii na iri na asaa tupu ha achọta ha. Alaeze Spanish weghachitere ma merie ya. Na 1804, etinyere ya na mpaghara Alta California, n'ime Spanish New Spain Viceroyalty. Mpaghara ahụ ghọrọ akụkụ nke Mexico na 1821 mgbe agha ya na-aga nke ọma maka nnwere onwe mana a gụrụ ya na United States na 1848 mgbe agha Mexico na America gasịrị. A haziri akụkụ ọdịda anyanwụ nke Alta California wee kwenye dị ka steeti 31st na Septemba 9, 1850. California Gold Rush malitere na 1848 dugara mgbanwe mgbanwe mmekọrịta ọha na eze na nnukwu mmadụ, na nnukwu njem site na ọwụwa anyanwụ na mba ọzọ na akụ na ụba na-esote ya. bulie elu.